युट्युबमा हिट तीज गीत – DailyHamroNews
– कुनै जमाना थियो, क्यासेट बिक्रीबाट गीत–संगीतको नाफा घाटाको लेखाजोखा गरिन्थ्यो । यद्यपि क्यासेट बिक्रीबाट कुनै पनि सिर्जना कतिपटक सुनियो अथवा हेरियो भन्ने यकिन तथ्यांक आउँदैनथ्यो । तर आजकाल सूचनाप्रविधि एवं सामाजिक सञ्जाल युट्युबको व्यापक प्रयोगले गर्दा कलाकारहरूले आफ्नो सिर्जना कतिपटक हेरियो भन्ने यकिन तथ्यांक छन् साथै दर्शकको प्रतिक्रिया पनि त्यसमै उपलब्ध हुन्छ, जसले गर्दा कलाकारहरू आफ्ना सिर्जना युट्युबमार्फत नै बजारमा ल्याउन दौडधुप गर्छन् ।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि युट्युबमा तीज गीतको बाढी नै आएको छ । अधिकांश लोकदोहोरी गायक–गायिकाले तीज गीत तयार पारेका छन् । युट्युबमा सार्वजनिक भएका कतिपय तीज गीत उत्कृष्ट भ्युज पाउँदै ट्रेन्डिङमा समेत परेका छन् भने कतिपय तीज गीतको अवस्था दयनीय छ । रोशन गैरे तथा आशा केसीको स्वरको खिस्स हाँस्ने छोरो शीर्षकको तीज गीतले युट्युबमा उत्कृष्ट भ्युज पाएको छ । सो गीतलाई हालसम्म २८ लाख ९७ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । सो गीतमा रोशन गैरेको शब्द तथा संगीत छ भने गीतको भिडियोमा गैरे तथा मोडल करिश्मा ढकालले अभिनय गरेका छन् ।
गायक पशुपति शर्माले विगतका वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि तीज गीतहरू बजारमा ल्याएका छन् । उनका सिर्जनाले युट्युबमा उत्कृष्ट भ्युज प्राप्त गरेका छन् । तीजका गीतबाटै चर्चा बटुलेका शर्माका लौरी हरायो, यही हो माया, माननीयज्यू आदि गीतले उत्कृष्ट भ्युज पाइरहेका छन् । ती तीनवटै गीतमा शर्माकै शब्द, संगीत तथा स्वर छ । लौरी हरायो गीतमा शर्मासागै, राजु ढकाल, देवी घर्ती तथा सुस्मिता घर्तीको स्वर सुन्न सकिन्छ । सो गीतलाई पनि हालसम्म २८ लाख ५५ हजारभन्दा धेरैपटक हेरिएको छ । यस्तै, पशुपतिकै शब्द, संगीत तथा स्वरको यही हो मायालाई युट्युबमा २३ लाख ४१भन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
सो गीतमा शर्मालाई सम्झना भण्डारीले साथ दिएकी छिन् । यस्तै पशुपति शर्माको शब्द, संगीत तथा स्वरको माननीयज्यू गीतले पनि युट्युबमा उत्कृष्ट भ्युज पाएको छ । सो गीत हालसम्म १५ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । गीतमा राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा गायिका कोमल वलीको पनि स्वर सुन्न सकिन्छ । भिडियोमा वली र शर्माकै अभिनय छ ।
यस्तै कोमल वली र प्रज्ञा वली दिदीबहिनीले बजारमा ल्याएको अर्को गीत आउ दिदीबहिनी गरौं रमाइलो गीतले पनि युट्युबमा १२ लाखभन्दा बढी भ्युज पाएको छ । सो गीतमा एकनारायण भण्डारीको शब्द तथा संगीत सुन्न सकिन्छ ।
सन्तोष केसी, राधिका हमाल तथा ललिता पौडेलको स्वरको जिरे खुर्सानी कमेडी तीज गीत आमाले पनि युट्युबमा उत्कृष्ट भ्युज पाएको छ । सो गीतलाई युट्युबमा हालसम्म २० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । गीतमा सन्तोष केसी र सुष्मा अधिकारीको शब्द तथा सन्तोष केसीको संगीत सुन्न सकिन्छ । गीतको भिडियोमा लक्ष्मी गिरी, रमा थपलिया, शिवहरि पौडेल, अञ्जु महर्जन, सुनिता गौतम, पुरुषोत्तम भण्डारी आदिले अभिनय गरेका छन् ।
यसैगरी खुमन अधिकारी र देवी घर्तीको स्वरको ‘एउटा जरुरी कुरा छ’ गीतले पनि युट्युबमा उत्कृष्ट भ्युज पाएको छ । सो गीत हालसम्म १६ लाख १९ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । गीतमा शब्द तथा संगीत महेन्द्र भण्डारीको छ भने त्यसको भिडियोमा निर्मल क्षेत्री र अञ्जली अधिकारीले अभिनय गरेका छन् ।
खुमन र विष्णु खत्रीको स्वरको उल्टो सुनेर गीतले पनि युट्युबमा उत्कृष्ट भ्युज पाएको छ । सो गीत हालसम्म १२ लाखभन्दा धेरैपटक हेरिएको छ । गीतमा जेके अधिकारीको शब्द तथा खुमन अधिकारीको संगीत सुन्न पाइन्छ । यस्तै गायिका सुनिता सेनको माइतीको आँगनी शीर्षकको तीज गीत युट्युबमा १४ लाख ७४ हजारभन्दा धेरैपटक हेरिएको छ । सो गीतमा शब्द तथा संगीत गणेश अधिकारीको छ । यो गीतले युट्युबमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ ।
विष्णु माझीको एकल स्वरको मार्याे दैया तीज गीतले युट्युबमा १६ लाख ८९ हजारभन्दा बढी भ्युज पाएको छ । सो गीतमा सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द तथा संगीत छ भने त्यसको भिडियोमा अभिनेत्री निता ढुंगानाले अभिनय गरेकी छिन् ।
यसैगरी हरि डिसी, उषा मगर र वीरेन्द्र खड्काको स्वरको उधारो गीतले पनि युट्युबमा १२ लाख ४८ हजारभन्दा बढी भ्युज पाएको छ । सो गीतमा दुर्गा केसीको शब्द तथा वीरेन्द्र खड्काको संगीत छ । गीतको भिडियोमा हरि डिसी तथा अनिता बस्नेत ‘मास्टर्नी’ ले अभिनय गरेका छन् ।
यसैगरी रेशम सापकोटा, पूर्णकला बिसी तथा सीता श्रेष्ठको स्वरको वृद्धाश्रम–२ फेरि चाला उही गीत युट्युबमा ११ लाख ११ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । सो गीतमा रेशम सापकोटाको शब्द तथा संगीत छ भने त्यसको भिडियोमा रेशम सापकोटा, नन्दा बस्याल, रोशनी सापकोटा, पवित्रा रिजाल, राजन पौडेल तथा उमाकान्त सापकोटाले अभिनय गरेका छन् ।
यस्तै प्रकाश सपुत, मञ्जु बिक तथा काजल गुरुङको स्वरको नौरङ्गी सपना गीतले पनि युट्युबमा उत्कृष्ट भ्युज पाएको छ । गीत हालसम्म ११ लाख ९८ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । सो गीतमा प्रकाश सपूतकै शब्द तथा संगीत छ भने त्यसको भिडियोमा हिउँवाला गौतम, दिपासा बिसी, प्रकाश सपूत, अञ्जली अधिकारी, करिश्मा ढकाल, आरुषी मगर, सिर्जना रेशमी मगर, सबु राई तथा विराज थापाले अभिनय गरेका छन् ।
यसैगरी पुरुषोत्तम न्यौपाने, तेजश रेग्मी, गणेश पौडेल तथा मञ्जु विकको स्वरको ससुरालीलाई चिठी गीतले युट्युबमा १० लाख २७ हजारभन्दा बढी भ्युज पाएको छ । गीतमा सतिश अधिकारीको शब्द तथा तेजश रेग्मीको संगीत सुन्न सकिन्छ । गीतको भिडियोमा सुरवीर पण्डित, यादव देवकोटा, सुशीला निरौला तथा सतिश अधिकारीले अभिनय गरेका छन् ।
Previous भूवन र रेखाको हाँसो, सक्कली कि बनावटी ?
Next नाडा अटो शोमा कुन गाडी कतिमा किन्न पाइन्छ ? हेर्नुस् मूल्यसूची